Singajonga njani iividiyo zikaYouTube ngaphandle kweintanethi | Iindaba zeGajethi
Ungazibukela njani iividiyo zikaYouTube ngaphandle kweintanethi
Olunye ukhetho esinalo ngoku kwaye abasebenzisi abaninzi bayaqhubeka nokuzibuza ukuba ungaqhubeka njani okanye ungazi ngqo ngawo ngumsebenzi wokuba ukwazi ukubukela iividiyo zethu esizithandayo ze-YouTube ngaphandle konxibelelwano lwe-intanethi. Into enokubonakala ngathi yinto entsha ayisiyiyo kwaphela, kwaye namhlanje siza kubona indlela Nawuphi na umsebenzisi unokuzijonga ezi vidiyo ngaphandle konxibelelwano lwenethiwekhi.
Into ekufuneka siyithathele ingqalelo kwaye ekufuneka siyigqamisile ngalo msebenzi yile Ukuze sikwazi ukubona ezi vidiyo kufuneka sinonxibelelwano lwe-intanethi ngaphambili, kuba ukuba asinalo uqhagamshelo ngekhe sikwazi ukujonga umxholo kamva. Imalunga nokukwazi ukukhuphela iividiyo kuqala ukuze sikwazi ukuzibona xa singenalo unxibelelwano ngenxa yokunqongophala okanye ngenxa yokuba singenayo idatha. Masibone ukuba ulula kwaye uluncedo kangakanani lo msebenzi.
Ungawukhuphela njani umculo kwi-YouTube
Omnye umba oza kuthathelwa ingqalelo kukuba kwamanye amazwe olu khetho alufumaneki ukuze kungabikho wonke umntu anokusebenzisa ezi zinto zikhutshelweyo zangaphambili ukujonga umxholo ngaphandle kweintanethi, kodwa kwiimeko ezininzi awuyi kuba nangxaki ngokwenza njalo. Inkonzo ixhomekeke kwisigubungelo kwaye oku kunokuba nefuthe ngokuthe ngqo nokuba ungawusebenzisa lo msebenzi okanye hayi, kunjalo Masibone ukuba isebenza njani kunye nezinye zeemfuno ekufuneka sizithathele ingqalelo ukuze ukwazi ukujonga iividiyo ku-YouTube ngaphandle kweintanethi.
1 Unesivumelwano kwi-YouTube yeNkulumbuso
2 Yiba nendawo ekhoyo kwimemori yefowuni
3 Ixesha lezi vidiyo kwi-smartphone lilinganiselwe
4 Ungazikhuphela njani iiVidiyo ukuze ubukele ngaphandle kweintanethi kwi-iOS nakwi-Android
5 Ungazicima njani iiVidiyo ezikhutshelweyo kwii-iOS nakwii-Android Devices
Unesivumelwano kwi-YouTube yeNkulumbuso
Ngokucacileyo ezi zikhetho ezinokuthi zongezwe yi-YouTube kubasebenzisi bayo ukuze bakwazi ukubona olu hlobo lomxholo kwifomathi yokusasaza kodwa ngaphandle kwesidingo sonxibelelwano. Kule meko, i-YouTube ibonelela abo banomdla kule nkonzo ithuba lokufumana inkonzo Ukusuka kwi-app ye-iOS ye-15,99 euro ngenyanga kunye nee-11,99 ze-euro zabasebenzisi be-Android kunye namanye amaqonga.
Umahluko wamaxabiso uyinyani nangona singaqondi ukuba kutheni kwaye ke sikushiya ukubanjwa esikwenzileyo ngexesha lokuvavanya le nkonzo. Ingcebiso ngokucacileyo kukuba uhlawula kancinci kangangoko unokwenza oku nakwesiphi na isixhobo ngaphandle kwe-iOS:
Inokuba yimpazamo, kodwa kuyo nayiphi na imeko inkonzo iyafana ke tsiba ngokuthe ngqo kuleyo ixabisa i-euro ezingama-11,99 kuba ziyafana kwaye akubonakali ngathi ayizukusebenza ngokufanayo ukuba siyisebenzisa kwi-iOS, I-Android okanye iPC. Kucacile sinenyanga yesilingo yasimahla yeNkulumbuso ye-YouTube Ukuba asikhange siyisebenzise le nyewe ngeakhawunti yethu, siya kuba nakho ukuzama ngaphambi kokuba siyigcine kwaye sihlawule umrhumo wenyanga.
Ngaphakathi kwimirhumo sifumana ukhetho I-Premium yeNtsapho, evumela i-17,99 euro ukuba yabelane namalungu angama-6 Ubhaliso ku-YouTube oluvela kusapho olunye.
Yiba nendawo ekhoyo kwimemori yefowuni
Kuya kufuneka sicoce ukuba iividiyo zifuna indawo eziza kugcinwa kwisixhobo sethu kwaye zinokujongwa ngaphandle kwesidingo sonxibelelwano. Kwimeko yezixhobo eziphathwayo okanye iipilisi, into ekufuneka siyithathele ingqalelo kuqala kukuba ukhetho lokubukela ezi vidiyo ngaphandle konxibelelwano lwenethiwekhi iya kusinyanzela ukuba sibe nendawo yokugcina eyaneleyo yokugcina kwakho.
Ke kubalulekile ukugcina oku engqondweni ukuze ukwazi ukusebenzisa lo msebenzi kwi-smartphone okanye ithebhulethi yethu, nokuba yi-Android okanye i-iOS, ngaphambi kokuqala ukukhuphela umxholo ngaphandle kokujonga nantoni na. Into emnandi ngezixhobo zangoku kukuba banendawo enkulu nangakumbi kunye nezo zongeza Amakhadi ememori e-MicroSD zilunge ngakumbi ukusebenzisa ezi ntlobo zemisebenzi kuba zibonelela ngendawo encinci kwisixhobo ngokwaso kwiifoto, kwiifayile, njl.
Ixesha lezi vidiyo kwi-smartphone lilinganiselwe
Elinye inqaku ekufuneka silithathele ingqalelo kukuba iividiyo ezigcinwe kunye nezikhutshelweyo kwisixhobo sethu zinomhla wokuphelelwa. Ke ezi vidiyo zigcinwe kakuhle kwisixhobo sethu baya kuhlala kwifolda kangangeentsuku ezingama-30 ukusukela ngexesha lokukhuphela, emva kweli xesha ividiyo ayisayi kubakho.
Benza oku ngokusisiseko kuba ezinye iividiyo ezikhutshelweyo zinokususwa ngumbhali, azifumaneki ngesizathu esithile kwiYouTube uqobo, njl. Enye inkcukacha ekufuneka igcinwe engqondweni yile ukuba singaphandle kwelinye ilizwe kuluhlu yintoni esishiya I-YouTube kanye apha, Iividiyo ezithile zinokukhutshelwa kwisoftware ka-YouTube kwaye zibukelwe ngaphandle kweintanethi iiyure ezingama-48. Emva koko kuya kufuneka siphinde sixhume isixhobo kwifowuni okanye kwinethiwekhi ye-Wi-Fi ukuze usetyenziso luqinisekise utshintsho kwividiyo okanye ukufumaneka kwayo.
Ungazikhuphela njani iiVidiyo ukuze ubukele ngaphandle kweintanethi kwi-iOS nakwi-Android
Emva kokucacisa konke oku, into ekufuneka siyilumkisile kukuba kukho amanye amaphepha ewebhu anokunika ithuba lokukhuphela iividiyo zikaYouTube ngaphandle kokuba yiNkulumbuso, kodwa le yinto ethi kwiimeko ezininzi ayigqibi ukuba yeyokwenyani kwaye ke eyona ilungileyo into ukuba sifuna ukonwabela Ngesiqinisekiso esipheleleyo kunye nomgangatho wevidiyo iividiyo ezikhutshelweyo ngokwazo, kungcono ukhethe iPremiyamu yeYouTube ikwasusa iintengiso kuwo wonke umxholo kweli qonga.
Ngokucacileyo, ukuba ungumthengi weevidiyo zeYouTube, oku kubhaliswa akunakuba yinzuzo kuwe, kungcono uthathe ingqalelo kwizinto eziphambili ngokubaluleka kwaye uvavanye iimfuno zomntu ngamnye kuthi ngaphambi kokuba uqalise ngokuqesha. Oko kwathethi, masibone i amanyathelo alula okukhuphela umxholo kwisixhobo sethu.
Unxibelelwano kwi-Wi-Fi okanye idatha yokukhuphela ividiyo okanye iividiyo
Siya kwiphepha lokudlala ividiyo kwaye ucofe u ukhetho Ukukhuphela ezantsi kwevidiyo efanayo
Emva kokukhuphela ividiyo, iqhosha Ukukhuphela Izakuvela ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka phantsi kwevidiyo kwaye iya kuya kwifowulda ekhutshelweyo
Ukuba ngasizathu sithile ngexesha lokukhuphela siphulukana nonxibelelwano kwinethiwekhi xa sikhuphela ividiyo okanye uluhlu lokudlala ukuze sibukele ngaphandle kweintanethi, inkqubela phambili yokukhuphela iya kuqhubeka ngokuzenzekelayo nje ukuba sixhume kunethiwekhi okanye kwi-Wi-Fi. Elula njengaleyo.
Ungazicima njani iiVidiyo ezikhutshelweyo kwii-iOS nakwii-Android Devices
Eyona nto ilula kukufikelela ngokuthe ngqo kuKhuphelo ngaphakathi kwithala leencwadi kwi-YouTube usetyenziso ngokwalo kwisixhobo sethu esiphathwayo, nokuba yi-Android okanye i-iOS. Ngoku kufuneka ucofe ukhetho Cima ukuvela kwividiyo enye. Kwimeko yokufuna ukucima zonke iividiyo, kufuneka sifikelele kuseto kuqwalaselo.
Sinqakraza kwimenyu ye-YouTube kwaye siza kwenza njalo Cwangcisa
Nje ukuba singaphakathi kufuneka sicofe nje Ukulanda kwaye emva koko ungene Cima ukhuphelo
Cinezela ukhetho ukwamukela kwibhokisi yencoko yababini engezantsi Ngaba uyafuna ukucima zonke iividiyo kunye nohlu lwadlalwayo?
Lo msebenzi unomdla kumaxesha amaninzi xa singenakho ukugubungela kwaye sifuna ukubona iividiyo ze-youtuber yethu esiyithandayo. Ngayiphi na imeko, into ebalulekileyo kukuba kucace ukuba ukhetho lokujonga umxholo we-YouTube ngaphandle kweintanethi kunokwenzeka kwaye kunjalo Kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungazibukela njani iividiyo zikaYouTube ngaphandle kweintanethi
Ithetha ukuthini iCC kunye neCCO
Uyifaka njani ifayile yokubuyisa kwirhafu yeWEB kwi-intanethi